Sadaasaa 23, 2020
Turkii bara 2019 akka hin qalamne dhiifamni godhameef (suuraa faayilii)
Aadaa Ameerikaa baayee hin barataminiin wagaa waggaatti ennaa ayyaana guyyaa galataa handaaqqoon Turkii tokkoo prezidaantii Ameerikaa aangoo irra jiruun akka hin qalamne dhiifamni godhamuufii dhaan irrbaata maatii ta’uu irraa oola. Aadaan prezidaantummaa waggaa waggaatti ta’u kun seenaa dheeraa qaba.
Irbaata ayyaana guyyaa galataa Ameerikaa irratt Indaaqqoo Tarkii Jedhamtu qalatanii nyaachuun aadaa yeroo dheeraaf ture yoo ta’u koloneeffattoota duraaniitiin jalqaba nyaataaf dhiyaate.
Aadaan Tarkii tokko qalma irraa baraaranii dhiifama gochuufiin kun kurna hedduu dura jalqabame. Dhiifamni Tarkiif ta’e inni jalqabaa prezidaant Abrahaam Linkeniin yoo ta’u ilmi isaanii Tarkii prezidaantiif kenname akka hin nyaanne ennaa gaafatetti. Garuu hanga yeroo jabanaatti aadaa hin turre. Prezidaanti Joon F Kenedii, Roonaald Reegan fi Richard Nixon qofaatu yeroo dhaa gara yerootti Tarkiif dhiifama gochaa turan. Ayyaanni kun ayyaana waggaa ta’ee kabajamuu kan jalqabe bara 1989 keessa ennaa bulchiinsa Prezidaant Joorj H. W. Bush ture.
Turkiin qalma irraa oolu filachuun baatilee hedduu kan fudhatu yoo ta’u adeemsi isaa federeshinii Turkii biyyoolessaan geggeessaama.
Dhuma irratti lamatu filatamu. Sirn tokko White House keessatti kan geggeeffamu yoo ta’u ka biroon immoo ol kaa’ama. Maqaan Turkii Sanaaf moggaafamu ijoollee barattooa barnoota sadarkaa duraatiin filatama.